Indlela ukukhetha isomisi zokutshiza centrifugal ngokuchanekileyo? - China Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment
Indlela ukukhetha isomisi zokutshiza centrifugal ngokuchanekileyo?
Nabani uye wasebenzisa esi sixhobo kufuneka bazi ukuba isomisi yokutshiza centrifugal banokudlala indima enamandla kumsebenzi, izinga yokomisa ikhawuleza kakhulu, kwaye uyakwazi ukuqinisekisa umgangatho weemveliso, luqhele ukusetyenziswa bubushushu ezibuthathaka unyango yokomisa iziyobisi. Ukongeza, dryer yokutshiza nazo kusetyenziswa ukulungiselela microcapsules, kwaye ukuphumeza nemiphumo emihle unyango. Ngoko sikhetha njani na?
Okokuqala, xa usenza izigqibo, but is ndimthelekisa iintlobo ezininzi ezahlukeneyo izixhobo. Kubalulekile ukuba sikhumbule ukuba kufuneka ukhethe ezo zixhobo ukuba ukuhlangabezana neemfuno zakho, ezo babuthathaka kakhulu kubume yaye zifuna indawo kancinane umsebenzi ofanayo.
Ingxaki yesibini, ngeli thuba ukuthenga notsala zokutshiza, kukuba but ukhangela ngcono izixhobo ukuba nokuhambisa kwaye kube lula ukulawula ngakumbi. Ngale ndlela, kuya kuba lula ngakumbi nalula ukusebenza, nto leyo ukunciphisa inani kwabasebenzisi kwaye ugcine iindleko.
Okwesithathu, kufuneka ukhethe izixhobo kunye nokusebenza ethembekileyo kwaye uzinzile, ukusetyenziswa kwamandla ngaphantsi kunye nokusebenza ephezulu, ukuze sikwazi ukunceda ngcono ndiwugqibe umsebenzi.
Okwesine, abasebenzisi kufuneka kuqala acacise iimfuno zabo ezikhoyo, kwakunye nezinto ezithile iimpawu eziphathekayo, kwaye uqinisekise ukuba isayizi esatsiba kwezixhobo ekhethiweyo uyazanelisa na iimfuno. Oko kukuthi, kufuneka ukhethe izixhobo spray wokomisa enokusinceda ukugqiba kakuhle umsebenzi.
Noko ke, enoba izixhobo ezifanelekileyo ikhethiwe, kusenokuba kukho ezinye iingxaki kwisicelo kanye. Ngeli xesha, kufuneka siqwalasele ukuba ekutshoneni dryer sokutshiza na iingxaki, ezifana nokuba isantya zokuxheshisela, iqondo lobushushu unengqiqo, kwaye iimpawu umbandela ngokwayo, njl, uze uphinde-uyilungise